मुलुक पुनर्निर्माणको दायित्व पुरा गर्ने जिम्मेवारी मेरो काँधमा :: एमाले अध्यक्ष ओली « Nepal24Hours.com – 'Integration Through Media'
मुलुक पुनर्निर्माणको दायित्व पुरा गर्ने जिम्मेवारी मेरो काँधमा :: एमाले अध्यक्ष ओली
१८ असार २०७२, शुक्रबार १०:०५ मा प्रकाशित
० राष्ट्रिय स्वयंसेवक अभियान जे सोचेर संचालन गर्नुभएको थियो, त्यस अनुसार भयो कि भएन ?
–वास्तवमा हामीले त यति गर्न सकिन्छ भन्ने सोचेका थियौं तर अरुले पत्याएका थिएनन् । यो अभियान हामीले घोषित रुपमा जेठ १० गतेदेखि चलाए पनि एमालेका कार्यकर्ताले पहिलेदेखिनै काम गरिरहेका थिए । भूकम्प आएको दिन वैशाख १२ गते एक घण्टाभित्रै मैले पार्टीको तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गरेर सिंगो पार्टी पंक्तिलाई उद्धार र राहतमा खट्न निर्देशन दिएको थिएँ । बैशाख १३ गतेबाट हामीले ब्यापक रुपमा घाइतेलाई बचाउन रक्तदान गर्नेदेखि लिएर लास उठाउने काम ब्यापक रुपमा सुरु गर्‍यौं । त्यसपछि कसरी जनतालाई त्रिपालहरू उपलव्ध गराउने र खुला आकाशबाट त्रिपाल मुनि भने पनि कसरी लैजाने भनेर हामीले प्रयास अघि बढायौं । हाम्रा कार्यकर्ताले स्वयंसेवक अभियान शुरु हुनु अघिनै घर टहरा बनाएर जनतालाई हस्तान्तरण गरिसकेका थिए । अनेरास्ववियुले स्कूल भवनहरू बनाउदै थियो, युवा संघले घर टहरा बनाइरहेको थियो । वास्तवमा जनतालाई विपद् पर्नासाथ एमाले पंक्ति जसरी यसपटक उन्नत ढंगले परिचालित भयो, त्यसले जनतामा भरोसा बढेको छ । हाम्रो पंक्तिमा पनि विपद्को बेला जनतालाई सघाउने अनुभव आर्जन भएको छ ।
० यति धेरै कार्यकर्ता परिचालन गर्नुभयो, कोही रक्सी खाने पनि थिए होलान्, युवा जोशका कार्यकर्ता थिए कतै पाटपिट पनि भयो होला, तर कहीँ कतै कुनै घटना भएको समाचार आएनन्, कसरी सम्भव भयो ?
–हजारौं कार्यकर्ता परिचालन गर्दा सामान्य केही घटना होलान् कि भन्ने अवश्य लागेको थियो । हजारौंमा कतिपयले मदिरा पिउने, चुरोट तान्ने हुन सक्छ । आदतको दास बनेपछि मान्छेलाई त्यहाँबाट उम्किन गाह्रो हुन्छ । तर पनि एमालेका कार्यकर्ताले कहीँकतै रक्सी खाएको, चुरोट खाएको फोटो पत्रकारले खिच्न पाएनन् । कतिले कतै त्यस्तो भएको समाचार लेख्न पाएनन् । एमालेलाई कहाँनिर सिध्याउने भनेर लागेका त थिए केही समूह र मान्छे तर हामीले त्यो मौका नै दिएनौं । पाटपिट त गर्ने थिएनन्, किनभने म आफैंले कडा निर्देशन दिएको थिएँ । बरु सहने तर कहीँकतै कसैमाथि आक्रमण नगर्ने भन्ने निर्देशन थियो । हाम्रा कार्यकर्ताले फौजी ढंगले त्यो निर्देशन पालना गरे ।
० तर एमालेको स्वयंसेवी अभियान खर्चिलो भयो भन्ने कुरा पनि आयो, जस्तो कि माओवादीका कार्यकर्ता तल्ला कमिटीले खुवाउन नसकेपछि एक सातामै फर्किए, कांग्रेसले गर्नै सकेन, तपाईहरूले कहाँबाट जुटाउनुभयो यत्रो खर्च ?
–वास्तवमा हाम्रो संस्थागत रुपमा खर्च नै भएन त्यसरी । तल्ला कमिटी जो आफैं पीडित छन्, उनीहरूलाई लाइएन । जहाँ भूकम्पको असर परेन ती जिल्लाका कमिटीहरूबाट जहाँ जे छ त्यो स्वस्फूर्त रुपमा उठ्यो । जस्तो झापाको दाल चामल र तेल त्यहाँको पार्टीले उठाएर रामेछा, सिन्धुपाल्चोक र दोलखामा पठायो । बर्दिया र दाङबाट पनि त्यसरी नै आयो । हामीले जनताबाट पानी समेत लिएनौं । वास्तवमा हाम्रा कार्यकर्ता कतिपयले ऋण ब्यहोरेका छन् यो अभियानका क्रममा ।
० सरकारमा भएको पार्टीले सरकारमार्फत नगरेर आफैं अभियान चलाउनुले सरकारप्रति विश्वास छैन भन्ने देखियो होइन ?
–यो कुरा हामीले धेरै सोच्यौं । हामीले सरकारले नै गरोस् भनेर पर्खेर पनि बस्यौं । सरकारलाई स्वयंसेवक अभियान चलाउ भनेर पटक पटक भनियो पनि । सरकारले माग्यो भने दिनुपर्छ भनेर हामीले १० हजार स्वयंसेवक पनि तयार बनाएर राख्यौं । तर सरकारले सकेन वा चाहेन । सरकारलाई पर्खिदा हाम्रो अभियान केही ढिला पनि भयो । वास्तवमा यो काम सरकारले नै गर्नुपर्दथ्यो । दु:खको कुरा सरकारले नगरेपछि हामीले गरेका हौं । हामीले यसबीचमा सबै स्वयंसवेकले काम गरेको दिनको हिसाब गर्दा १० लाख दिन श्रम गर्‍यौं । सरकारले ज्याला दिएर लगाएको भए करोडौं रुपैयाँ लाग्थ्यो । वास्तवमा एमालेले जे जति गरेको छ, सबै पार्टीले गर्ने हो भने भूकम्प पीडित सबैले तत्काल बास पाउने रहेछन् । तर हाम्रो एक महिने अभियान सकिए पनि हामी अझै जनतालाई सेवा गर्ने काम मै छौं । नयाँ नेपाल निर्माणको नेतृत्व अब एमालेले मात्र गर्न सक्छ भन्ने पुष्टि भइसकेको छ र सबैले स्वीकार पनि गरिसकेका छन् ।
० घुमाइ फिराई अब एमालेको अध्यक्ष केपी ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारले नवनिर्माण गर्छ भन्नुभयो होइन ?
–यो कुरा त अब मैले भन्नु पर्छ र ? व्यवहारबाट प्रष्ट भइसकेको कुरा हो । एमाले भन्दा बाहिर रहेका मान्छेहरूलेनै मानिसके कि अब यो देश बनाउन एमाले बाहेक अरुले सक्दैन । एमालेको काँधमा त्यो जिम्मेवारी आउदैछ ।
० एमालेको काँधमा कि केपी ओलीको काँधमा ?
–एमालेले यो मुुलुकको नेतृत्व गर्छ अब । एमालेको नेतृत्व अध्यक्षले गरेको छ भनेपछि यसमा अरु केही भन्नु पर्छ र ? मुख्य कुरा हाम्रो पार्टीको बिचार र नीतिले नेतृत्व गर्ने हो । हामीले गर्न सक्छौं भनेर प्रमाणित गरेका छौं । यो देशलाई समृद्ध बनाउने, यो देशको नवनिर्माण गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण र भिजन मसंग छ, यदि मैले नेतृत्व गर्ने अवस्था आएमा गरेर देखाउछु ।
० तर तपाईलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिन संविधान नै जारी नगर्ने षडयन्त्र पो शुरु भयो भन्छन्, अदालतको आदेश, राष्ट्रपतिको चलखेल र प्रधानमन्त्रीले महाधिवेशनसम्म लम्ब्याउन खोजेको कुरा के हो ?
– यो कुरा हामीलाई पहिलेनै थाहा थियो । संविधान बन्ने निश्चित भएपछि धेरै खालका चलखेल हुन्छन्, षडयन्त्र हुन्छन् भन्ने बुझेरै असार मसान्तभित्र संविधान जारी गर्ने भनेका हौं । अहिले आएर संविधान बनाउन नदिने वा तत्काल बनाउन नदिने र बिलम्ब गर्ने, बिभिन्न स्वार्थहरू त्यसका पृष्ठभागमा रहने जस्ता कुराहरू देखा परेका छन् । तर १६ बुँदेको औचित्य तलमाथि हुदैन । असारभित्रमा संविधान बनाउने हाम्रो सहमति हो, त्यो पनि तलमाथि हुदैन । त्यसलाई असफल बनाउन खोजियो भने अरु प्रसंगका तिथी मितिहरूमा पनि हाम्रो प्रतिबद्धता रहनुपर्ने कुनै अवाश्यकता पर्दैन । विभिन्न प्रकारका सहमतिहरू छाडेर चलाखीले काम गर्ने प्रयास हुदैछन् । तर जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्ति र शक्तिले नकारात्मक भूमिका खेलेर पृथक खालको परिस्थिति निर्माण हुन दिन्छन् जस्तो लाग्दैन । त्यसैले अहिले अरु जे जस्तो आशंका गर्दछन् म त्यसो ठान्दिन । असारभित्र संविधान जारी हुन्छ, हाम्रा सहमति अनुसार देश अघि बढ्छ । हुन नदिन विभिन्न खालका प्रयास त प्रकट भइरहेका छन् । तर, संविधान असार मसान्तभित्र जारी हुन्छ । संविधानसभाभन्दा ठूलो यो मुुलुकमा अन्य कुनै निकाय छैन । उसले आफ्नो विधि आफैं तय गर्छ ।
० तर, राष्ट्रपतिले पनि अदालतको आदेशको सम्मान गर भने नि ?
–उहाँलाई आफूलाई लागेका कुरा राख्नुभएको छ । अदालतको त्रुटिपूर्ण निर्णयले गर्दा मान्छेहरूमा आक्रोश र उत्तैजना आउन सक्छ भनेर उहाँले संयमित हुनुस् भन्नु भएको होला । त्यसलाई मैले फरक ढंगले लिएको छैन । तर त्यो भन्दा बढी उहाँले गर्न पनि मिल्दैन । राष्ट्रपति सेरोमोनियल हो, उहाँले राजनीति गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा राम्रोसंग बुझेको हुनुपर्छ ।
० असारमा संविधान नबन्ने कुरा त कांग्रेसको महाधिवेशनले पनि देखायो, प्रधानमन्त्री पनि फास्टट्र्याकका नाममा जनतामा जाने कुरा रोक्न हुदैन भन्दैछन् नि ?
–जनतामा जान हुदैन भनेर कसले भनेको छ र ? जनताको प्रतिक्रिया लिने नै हो । विधि प्रक्रियालाई अलि छोट्ट्याउने भनेको न हो । यो कुरा त प्रधानमन्त्रीलेनै भन्नु भएको हो । सुशील कोइरालाजीले नै हो, फास्टट्रयाक होइन सुपर फास्टट्र्याक विधिबाट संविधान बनाउनुपर्छ भन्नुभएको । त्यसैले उहाँले महाधिवेशनका नाममा त्यस्तो गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन । उहाँले गरेका प्रतिबद्धताहरूबाट ब्याक भएर प्रधानमन्त्री चल्न खोज्नुभएको देखिन जान्छ । यदि उहाँले त्यही सोच्नु भएको हो भने त्यसले परिस्थितिलाई नयाँ मोड दिन सक्छ । पार्टीको महाधिवेशनसम्म प्रधानमन्त्री रहेर त्यसका निम्ति संविधान नबनाएर प्रधानमन्त्री जान खोज्नुहुन्छ भने, बिलम्ब गरेर षडयन्त्रलाई खेल्ने ठाउँ दिनुहुन्छ भने त्यो गम्भीर कुरा हुन्छ । त्यस्तो कुनै षडयन्त्र सफल हुने जस्तो सम्भावना म देख्दिन । मलाई विश्वास छ उहाँले त्यस्तो गर्नुहुन्न, संविधान असार मसान्तभित्रै जारी हुन्छ ।
० यदि त्यस्तो भयो भने एमाले के गर्छ ?
–त्यस्तो अवस्थामा त प्रतिबद्धता एउटाले पालना नगरेपछि अर्कोले पालना गर्नुपर्छ भन्ने छैन । त्यो नयाँ ढंगले अघि बढ्छ । उहाँहरूलाई लौ गरिखानुस् भनेर हामीले सरकारबाट बाहिर आउने परिस्थिति बन्छ । किनभने सम्झौता तोडिएपछि एमाले सरकारमा बसिरहने भन्ने कुरा हुदैन । नयाँ ढंगले परिस्थिति अघि बढ्छ । तर, मलाई बिश्वास छ, प्रधानमन्त्रीले त्यो गल्ती गर्नु हुन्न । उहाँले मलाई विश्वास गर्नुस्, बोलि फेर्दिन भन्नु भएको छ । जतिसक्दो चाँडो प्रक्रियाको रित पुर्‍याएर संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्नुभएको हो । त्यसैले धेरै आशंका नगरौं ।